डिप्रशेनका कारण यी अभिनेत्रीले आत्महत्या गरिन्
कहिले रिलिज हुँदैछ राजामौलीको बहुप्रतिक्षित फिल्म ‘आरआरआर’ ?
यो दिन रिलिज हुँदैछ राजमौलीको फिल्म 'आरआरआर'
बंगलादेशी फिचर फिल्म खिच्दै कुशल
हालै कुशलले बंगलादेशी फिचर फिल्म 'गिन्डो' को डिओपी ( डिरेक्टर अफ फोटोग्राफी ) का रुपमा काम गर्ने अवसर पाएका छन् । बंगलादेशी टेलिभिजनको लागि कुशलले निर्माण गरेका टेलिभिजन विज्ञापनहरुकै माध्यमबाट कुशललाई बंगला फिल्मसम्मको ढोका खुला भएको हो ।
यस्तो बनेर आयो ‘न यता न उता’को ट्रेलर
काठमाडौं । फिल्म ‘न यता न उता’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा फिल्मका निर्माण पक्षले ट्रेलर सार्वजनिक गरेका हुन् ।
अनमोल मेगास्टार, अरुलाई केको खसखस !
काठमाडौँ । प्रायः हिट फिल्म दिएका अनमोल केसी युवा पुस्तामाझ चर्चित छन् । उनको फिल्म रिलिज हुँदा कलेज बंक गर्ने विद्यार्थीको संख्या पनि कम छैन । उनै अनमोललाई कोहीले ‘मेगास्टर’को विशेषणले विभूषित गरिदिए । यो विभूषणलाई केहीले मन पराए भने केहीले देखिसहेनन् । गएको शुक्रबार फिल्म ‘क्याप्टेन’को गीत रिलिज कार्यक्रममा पनि यो कुरा खासखुस–खासखुस हुँदै ठूलो रुप लिइहाल्यो ।
एजेन्सी । अभिनेत्री हिना खानले ‘कसौटी जिन्दगी २’मा कोमोलिकाको भुमिका निभाइरहेकी छन् । यस शोमा हिनाको नेगेटिभ भुमिका रहेको छ । शोमा उनले प्रेरणा र अनुरागको जीवनमा विष मिसाउने काम गर्छन् । उनको भुमिका नेगेटिभ भएपनि दर्शकहरु उनको लुक्सको दीवाना बनिसकेका छन् ।
ब्रेकअप जोडी एकै फिल्ममा
काठमाडौं । हलिउड–बलिउडतिर ब्रेकअप भएका प्रेमी–प्रेमीकासँग स्क्रिन सेयर गर्नु नौलो कुरा हैन । निकै चर्चा कमाएको ब्रेकअप जोडी सलमान खान र क्याट्रिना यसको उदाहरणमध्ये एक हो ।
नायिका केकी अधिकारी र गायक आर्जन पाण्डेबीच प्रेम रहेको खुलासा
काठमाडौं । प्रेम र पिम्पल जति लुकायो, त्यति देखिइहाल्छ रे । नायिका केकी अधिकारीको हकमा पनि यस्तै देखियो। उनले जति लुकाउन खोजे पनि देखिएको पिम्पल हैन, प्रेम हो।
यस्तो छ चलचित्र ‘गोपी’को ट्रेलर
काठमाडौँ । चलचित्र ‘गोपी’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । बुधबार ओएसआर डिजिटलको युट्युब च्यानलमार्फत चलचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको हो ।
मात्र ५१ रुपैयाँमा मेनुका पौडेलको गीतको भिडियो सुटिङ
काठमाडौं । ५१ रुपैयाँ लगानिमा म्युजिक भिडियो निर्माण भयो भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर, केही दिन अगाडि मध्यराती नक्साल बाल मन्दिरमा एक भिडियो निर्माण हुँदै थियो जुन साँचै प्रतिव्यक्ति ५१ रुपैयाँ पारिश्रमिक लिएर छायाङ्कन भइरहेको थियो ।
काठमाडौं । अभिनेत्री तथा मोडेल अनु शाह, अर्जुन र सरन पंगेनीको अभिनय रहेको म्युजिक भिडियो एक तर्फी माया लाई विन्ध्यावासिनी म्युजिकले सार्वजनिक गरेको छ ।
हिरोइन साम्राज्ञीलाई आफ्नो ब्वाइफ्रेण्ड देखाउने रहर !
काठमाडौं । हिरोइनहरुको विभिन्न सोख हुन्छ । जस्तो कि हाम्री प्रियंका कार्कीलाई बिकिनीमा फोटो खिचाउने चर्को सोख हुन्छ ।